Gudoomiyaha Gudida Qaban Qaabada Shirka Maax Oo Ka Hadlay Dilkii Ka Dhacay Deegaanka Darar-weyne
Gudoomiyaha Gudida Qaban Qaabada Shirka Maax Oo Ka Hadlay Dilkii Ka Dhacay Deegaanka Darar-weyne Gudoomiyaha Gudida Qaban Qaabada Shirka Maax Oo Ka Hadlay Dilkii Ka Dhacay Deegaanka Darar-weyne
Jiif-Caaqil MAXAMUUD CALI Oo Ka Dareen Celinaya Dilkii Foosha Xumaa Ee Ka Dhacay DARAR-WEYNE Ayaa Ka Hadlay Qiimaha Nabadu Leedahay Iyo Aafada Colaadu Keento Jiif Caaqilka Oo Qoraal Wax Badan Iftiiminaya Oo Uu Kusoo Bandhigay Bartiisa Uu Ka Isticmaalo FACEBOOK-GA Jiif Caaqil Maxamuud Ahna Gudoomiyaha Gudida Qaban Qaabada Shirka Habarjeclo Bari
Waxay Hadaladiisii U Dhignaayeen Sidatan Dhacdada foosha xun ee dhowaan ka dhacday Dararweyne waan canbaaraynayaa shakhsigii dilkaa waxishnimada ah geystayna waa in cadalada la horkeena siduu heshiisku ahaa.
Marxuumkana gacanta ka xaqdarini dishay alle haw naxaristo ehelkii iyo qaraabadii uu kabaxayna waxaan ilahay uga rajaynayaa inuu samir iyo iiman ka siiyo Hadaba waxaa haboon inaynu isla fahano Nabadu qiimaha ay leedahay iyo aafada colaadu leedahayba NABADU WAA DANTA UMADA Sida aynu isla wada ognahay colaadu dan uma aha dadka,
duunyada iyo deegaanka midnaba. Danta dadka iyo deegaanku waxay ku jirtaa nabada iyo xasiloonida. Marka ay dagmadu nabad tahay, dadkeedu waxay aroortii u wada dareeraan shaqo iyo waxbarasho. Waxayna dadaal u galaan sidii ay noloshooda kor ugu soo qaadi lahaayeen dhan kastaba. Waxay dhistaan guryo iyo goobo ganacsi oo rasmi ah. Meesha nabadi ka jirto waxaa ka jira farxad iyo rayrayn, waxaana ku badan damaashaadka xafladaha aroosyada, iidaha iyo dhalashada. Halka ay colaadi ka jirtose waxaa ku badan aasayda, tacsida, agoonta iyo naafada.